Nidaamka Muuqaal-Sawir gacmeed-Cod-bixiye-Weyn
Mee, 2017 Featured, Geospatial - GIS, tabo cusub
Qalabka Caddeynta iyo Qalabka Caddeynta ee Codka Waddanka ah waa sheyga sannadaha waayo-aragnimada leh ee qaybta macaamiisha. Laga soo bilaabo macmiilkii ugu horreeyay ee soo saaro kartoonka juqraafi ee Bogotá, Colombia, waxay kordhiyeen macaamiishooda dhammaan dhulka adduunka, ka qaybqaatay mashaariic kala duwan iyo warshado.
Codsiyada qalabkoodu waa mid ballaadhan sidii aan ku qiyaasi karno, iyada oo tixgelinaysa in yar yar marka loo eego dalabka Streetview kor u kacay si loo xaliyo baahida iyo hoos u dhigo mashaariicda waaweyn. Xaaladdan oo kale, dhiirrigeliyaha alaabooyinkan ayaa ku takhasusay bixinta qalabka iyo barnaamijyada dhammaystiran ee diiwaangelinta, farsamaynta iyo daabacaadda Sawirka Waddooyinka ee xalinta sarreeya, oo leh madaxbannaani buuxda iyo qoraaga.
Maxaad isticmaali kartaa inaad siiso Dalabka Codsiga Wadada?
Maareynta Hantida Guryaha
Kamarad xallinta sare waa xariiqda dhexe ee nidaamyadan, oo leh karti qabasho xog badan, kaydinta illaa 7 sawirrada muuqaalka ah ee labaad. Macluumaadka iyo feylayaasha waxaa lagu kaydiyaa kamarad ku jirta xasuusta SSD oo isweydaarsi, kaydinta ilaa 250.000 Streetview images iyo ilaa saacadaha 9 ee qabashada joogtada ah.
Qaabab kala duwan oo isdabajoog ah ayaa loo heli karaa mid kasta oo ka mid ah alaabooyinka loo yaqaan "Streetview Applied Streetview". Mid kasta oo ka mid ah saddexda qaybood ee nidaamka waxaa loogu talagalay in lagu hirgeliyo qabashada xogta degaanno kala duwan, iyo guud ahaan madaxbannaanida.
Nidaamka wuxuu ku xiran yahay gaari kasta oo gaar ah ama gaariga si dhakhso ah u qabsado xogta waddooyinka, waddooyinka, wadooyinka wasakhda iyo waxyaabo kale oo badan.
Qalabaynta magnetka ee saqafka
Tablet Samsung Galaxy Tab S2 (8) sida Control Remote Control WiFi
Kantaroolka Remote Control ee Android
Xusuusta SSD oo is dhaafsan
UV Beddelaadaha Fikradaha
Qalabka GNSS (GPS 4 hal)
Antenna (qalab heerkul ah)
Bateriga iyo batteri
Connect-Quick Connector} Kombiyuutarka Batroolka
Hal sano oo ah shahaadada loogu talagalay Abuuraha, barnaamijka wax-qabadka ee wadooyinka oo dhan
Waxaa lagu daray iibsashada koox. Barnaamijkani wuxuu hirgeliyaa 50.000 Streetviews saacadaha 24 oo wuxuu abuuraa shabakad shaqo, iyada oo suurtagal ah in lagu hagaajiyo qalabkan dhexdhexaadka ah baahiyahaaga.
Nidaamkan sawir-qaadashada gaarka ah wuxuu fududeynayaa abuurista iyo is-dhex-galka unugyada iyo / ama qiimayaasha joqraafi, faa'iido u leh barowsarka. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijka "Photogram" si aad u calaamadiso halbeegyada, waxaad tilmaameysaa qodobbada xiisaha leh si ay u fududeeyaan raadinta; si loo qiyaaso masaafada iyo dusha.
Codsiga Android waxaa lagu rakibay kiniinada Samsung Galaxy S2 (8)) oo la socda qalabka. Xakamaynta Maaraynta Kumbuyuutarka waxay kuu ogolaaneysaa inaad xakamayso oo aad ku sawirto kamaradda iyo GPS-ga marka aad soo saari doonto Raadinta Waddooyinka.
Barnaamijka Codsiyada Waddaniga ah waa xal dhammaystiran oo ah waxa shirkadu u baahan tahay
Haddii sawirku uu qiimihiisu yahay kun oo eray, ka dibna codsiyada Streetview ayaa laga yaabaa inuu u dhigmo riwaayad dhan. Codsiga Streetview wuxuu bixiyaa fursad uu ku soo saaro oo uu daabaco sheeko u gaar ah shahaadada 360, oo ah xal dhamaystiran, buuxa oo xulasho ah iyo si baaxad leh ula qabsan kara noocyada kala duwan ee ganacsiyada, warshadaha iyo codsiyada.
Barnaamijka Cod-bixinta Streetview wuxuu ku yaallaa heerka ugu sareeya suuqa. Xalkeeda waxaa laga heli karaa caalamka, oo ay ka mid tahay baahida loo qabo warshadaha, si loo abuuro qaddar badan oo rikoodhin ah oo lagu xalliyo qaraarka sare, si loo ilaaliyo xakamaynta iyo amniga waqti kasta. Qormo Qormo Wareegtadu waa, gaaban, nidaam aad u macquul ah, fudud, dhamaystiran oo madaxbanaan; ee ugu fiican ee aan ku arkay suuqa.
Ma jiraan wax xadidan oo ku saabsan codsiga noocan ah ee sawirada qaraashka sare. Tan waxaa ka mid ingieniería, ay sahan iyo khariidaynta, iyo sidoo kale dhul ballaaran oo kaabayaasha waraaqo, sida hadda jira khadadka korontada, tuubooyinka, fiilooyinka firfircoon fiber optic iyo.
Mujaahidiinta Codsiyada Streetview waa abuuraha, barnaamijkan wax-qabadkan xiisaha leh iyo xiisaha leh ayaa awood u leh inuu la qabsado 50,000 Streetviews hal maalin. Tani waxay fure u tahay in la ilaaliyo dhammaan xogta iyo xogta kama dambeysta ah ee Navigator Street, taas oo kuu oggolaanaysa inaad go'aan ka gaarto waxa, goorta iyo cida lala wadaagi karo natiijooyinka.
Sadexda baabuur ee loo yaqaan 'Streetview Street', oo ah gawaarida, gawaarida, iyo gawaarida tareemadu waxay daboolaan intooda badan dhulka iyo joqraafiga loo baahan yahay si loo abuuro rayi ururinta. Barnaamijyada ku saleysan Foomamka Furan waxay awood u leeyihiin in ay ku shaqeeyaan barnaamijyo aad u sareeya. Iyada oo xirmooyinka tababarka, baahiyo badan oo farsamo ee Isticmaalka Dhismaha Streetview iyo Software ayaa la daboolay, tirtiridda baahida loo qabo in laga baxo adeegyada dibedda marka la xalinayo baahida hawsha shaqada.
"Tayada sare ee aragtida wadooyinka waxay kaa caawineysaa inaad samayso go'aamada muhiimka ah maalin maalmaha ka mid ah ganacsiga, si aad u ogaato dabeecada dhabta ah ee ku hareeraysan dhismaha cusub ee dhismaha, ama si aad u muujiso macaamiisha ama maalgashadayaasha halkaa ku yaal. oo ku yaal meel xiiso badan. Mawaadiic kale ma sameyn karo tan ka fiican taxane dariiqyo ah oo ka hor, ka hor iyo ka dib. Waxaan nidaamkayaga ku samaynay macaamiisha ganacsiga ee maskaxda ku haya, iyada oo xoojineysa xalalka gundhigga ah si loo qabsado, loo hirgeliyo oo loo muujiyo sawiro Waddooyin. Hayso dhammaan shaqada socodka gudaha, waa mid deg deg ah, jajaban oo raqiis ah, oo gacanta ku haya geeddi-socodka oo dhan ».
Jan Mantkowski, agaasimaha shirkadda Streetview Technology GmbH
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan ku talinaynaa
Post Previous«Previous Abaalmarinta "Oscar of Kaabayaasha" waxay noqon doontaa Singapore
Post Next Sidee maamulku u noqon doonaa mustaqbal? - 2034 Aragtida cadawgaNext »